लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅢ） -टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅢ）
समय: 2019-12-12 हिट्स: 133
आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने परिणाम
कुनै पनि आईपीएल वा लेजर कपाल हटाउने विधिहरूले तत्काल परिणाम प्रदान गर्दैन। वैक्सिंग र थ्रेडि withको विपरीत, तपाईं पूर्ण रूपमा चिल्लो, कपाल-मुक्त छालाको साथ उपचार सत्र छोड्नुहुन्न। अर्को केहि हप्ताहरूमा मरेपछि र कपाल कपालबाट बाहिरिनेछ र जसको विकास चक्रको चरणमा असर पर्न सकेन जुन उनीहरू पहिलो उपचारका लागि थिए अर्को सत्र (वा अधिक) आवश्यक पर्दछ। तपाईं सत्रहरू बीचमा दाढी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, किनकि तपाईंलाई कुनै बढ्ने समय चाहिदैन।
यद्यपि, दुबै आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने काम मोमिंग र थ्रेडि overको फाइदा भनेको समयको साथ तपाईं कपालको वृद्धिको स्थायी कटौती हासिल गर्नुहुनेछ। बढ्न सक्ने कपालले यति ढिलो गर्नेछ, त्यसैले तपाईले प्राय जसो दाह्री बनाउनु पर्छ। तिनीहरू पनि पातलो र कम कोर्स फिर्ता हुर्कन सक्छ। तिनीहरू पिलर पनि हुर्कन सक्छन्, त्यसैले तिनीहरू कम स्पष्ट छन्।
धेरै व्यक्तिहरू पत्ता लाग्छ उनीहरूले १ र १० बिचको उपचारपछिको इलाकाबाट स्थायी कपाल झर्ने सम्भावना पाउँछन्, पर्याप्त परिणामका लागि औसत session सत्रहरू। तपाईंले जुन पनि विधि छनौट गर्नुभयो, तपाईंलाई कहिलेकाँही प्रत्येक केही महिना वा वार्षिक रूपमा एक अप-अप उपचारको आवश्यकता पर्न सक्छ, तर तपाईंले कपालको बृद्धिमा ठूलो भिन्नता देख्नुहुनेछ।
होम लेजर र आईपीएल उपकरणहरूमा
त्यहाँ अब एटिम-होम आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने किटहरू बजारमा उपलब्ध छन्, जसमध्ये धेरै एफडीए-खाली छन्। तिनीहरू उही टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ जुन डर्मेटोलॉजी क्लीनिकहरू र छाला सलुनहरू प्रयोग गर्दछन्, तर विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो ताकि तिनीहरू अप्रशिक्षित र अयोग्य व्यक्तिहरू द्वारा प्रयोग गर्न सुरक्षित रहन। पेशेवर मेशिनहरु को रूप मा उहि विज्ञान प्रयोग गरेर, ती अधिक धेरै किफायती मूल्य मा महान परिणाम प्राप्त गर्न र घर छाड्नु बिना नै आफ्नो छाला उपचार गर्न सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै सूटकेसमा प्याक गर्नको लागि पर्याप्त सानो हुन्छन्, ताकि तपाईं तिनीहरूलाई टाढा लैजानुहुन्छ र आफै हिंड्दा आफै उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। केहि उत्तम at-home लेजर र आईपीएल कपाल हटाउने किटहरू उपलब्धमा एक नजर लिनको लागि, हाम्रो उत्पादन विवरणमा हेर्नुहोस्।
अघिल्लो: आईपीएल कपाल हटाउन अघि Fac तथ्यहरू तपाईंले जान्नु आवश्यक छ
अर्को: लेजर र आईपीएल कपाल हटाउन बीच के भिन्नता छ? （PartⅠ）